Kusunungurwa Pauranda—Kare Uye Iye Zvino
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bulgarian Cambodian Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Bhizinesi rekutengesa vanhu vemuAfrica senhapwa kuAmerica raiva nemari chaizvo
Blessing * asvika kuEurope avimbiswa basa rekunogadzira vanhu musoro. Asi pashure pemazuva 10 ekurohwa, uku achityisidzirwa kuti mhuri yaainge asiya kumusha yaizourayiwa, akamanikidzwa kuita basa rechipfambi.
Mukadzi aichengeta pfambi akaudza Blessing kuti aite chipfambi chaimuwanisa mari iri pakati pe200 kusvika ku300 euros usiku hwega hwega, kuti abhadhare 40 000 euros yakashandiswa pakuuya kwaakaita kuEurope. * “Ndaigara ndichifunga kutiza,” anodaro Blessing, “asi ndaitya zvavaiti vaizoita kumhuri yangu. Ndakashaya kuti ndoita sei.” Zvakaitika kuna Blessing ndizvo zviri kuitikawo kune vanhu vanenge 4 miriyoni vari kushandiswa mumabasa echipfambi.
Makore anoda kusvika 4 000 apfuura, mumwe mukomana ainzi Josefa akatengeswa nevakoma vake. Akazopedzisira ava muranda pamba pemumwe murume wekuIjipiti ainge akakurumbira. Josefa haana kusvika achitambudzwa natenzi wake, sezvakaitika kuna Blessing. Asi Josefa paakaramba kurara nemudzimai watenzi wake, mudzimai wacho akabva amupomera achiti akanga achida kumubata chibharo. Akabva akandwa mujeri, achibva asungwa nesimbi.—Genesisi 39:1-20; Pisarema 105:17, 18.
Josefa akatorwa kuti ave muranda, uye ndozvakaitikawo kuna Blessing. Saka tsika iyi yekutorwa kwevanhu vachinotengeswa kuti vapfumise vamwe vanhu yakabvira kare.
HONDO DZAIITA KUTI VANHU VAITWE VARANDA
Kurwa hondo kwaiita kuti nyika dzakawanda dziwane varanda. Mambo wekuIjipiti ainzi Thutmose III anonzi paakakunda vaKenani, akadzoka aine varanda 90 000. Vanhu ivavo vakashandiswa mumigodhi, pakuvaka temberi, uye pakuchera migero.
Umambo hweRoma hwaiwanawo varanda vakawanda chaizvo muhondo, uye dzimwe nguva izvi ndizvo zvaiita kuti varwe hondo. Zvinonzi pakazosvika gore ra30 B.C.E., inenge hafu yevagari vemuguta reRoma vaiva varanda. Varanda vakawanda vekuIjipiti uye vekuRoma vaiitirwa utsinye. Semuenzaniso, varanda vaishanda mumigodhi yekuRoma vaiwanzofa vasati vasvitsa makore 30.
Nekufamba kwaiita nguva, vakawanda vakanga vava kutengeswa sevaranda. Kubva kumakore ekuma1500 kusvika kuma1800, kutengeswa kwevaranda vaibva kuAfrica vachiendeswa kuAmerica kwaitova bhizinesi raiwanisa mari svinu. ‘Zvinonzi varume, vakadzi uye vana vari pakati pe25 miriyoni ne30 miriyoni vakapambwa vakanotengeswa,’ rakadaro sangano reUNESCO. Zviuru zvevanhu zvinonzi zvakafira mugungwa reAtlantic vachiendeswa kuAmerica. Olaudah Equiano, ndemumwe wevakapona paiitika izvi, uye akati: “Kuridza mhere kwaiita vakadzi, uye kugomera kwevanhu vainge vava kufa kwaityisa.”
Zvinorwadza kuti nanhasi vanhu vachiri kuitwa varanda. Sangano reInternational Labour Organization rakataura kuti varume, vakadzi uye vana vanoda kusvika 21 miriyoni vachiri kushandiswa sevaranda, vachihoreswa mari shomanana kana kuti kusatopiwa zvachose. Mazuva ano, varanda vanoshandiswa mumigodhi, mumafekitori anogadzira hembe uye anogadzira zvidhinha, munzvimbo dzinoitwa zvechipfambi uye mudzimba dzevanhu. Zvinhu izvi zviri kuramba zvichiwedzera, kunyange zvazvo kuri kutyora mutemo.
Vanhu vakawanda vachiri kushandiswa sevaranda
Varanda vakawanda vakaedza kurwisa kuti vazvisunungure nemhaka yeutsinye hwavaiitirwa. Mumwe murume ainzi Spartacus akabatana nevamwe varanda vaida kusvika 100 000 kuti vapandukire vaRoma, asi havana kubudirira. Mumakore ekuma1700, varanda vaiva pachitsuwa chainzi Hispaniola vakaedza kupandukira hurumende. Utsinye hwavaiitirwa pavaishanda muminda yenzimbe ndihwo hwakaita kuti vatange hondo yakaita makore 13, zvichibva zvazoita kuti chitsuwa ichi chizonzi Haiti uye vakatanga kuzvitonga mugore ra1804.
Pavaranda vose vati vambosunungurwa, vaIsraeri ndivo vakanyatsosunungurwa nenzira yakanaka. Rudzi rwavo rwaiva nevanhu vangasvika 3 miriyoni uye vose vakasunungurwa kubva muuranda kuIjipiti. Zvechokwadi vaifanira kusunungurwa nekuti Bhaibheri rinoti vaIjipiti ‘vaivaitisa uranda hwemarudzi ose vachivadzvinyirira.’ (Eksodho 1:11-14) Mumwe Farao akatoronga kuti vana vacheche vevaIsraeri vaiberekwa vaurayiwe kuti vaIsraeri vasawandisa.—Eksodho 1:8-22.
Mwari ndiye akapindira pakusunungura vaIsraeri. Akaudza Mosesi kuti “ndinonyatsoziva kurwadziwa kwavo. Ndichaburuka kuti ndivanunure.” (Eksodho 3:7, 8) Nanhasi vaJudha pasi rose vanopemberera Paseka gore negore vachiyeuka zuva ravakasunungurwa.—Eksodho 12:14.
KUPERA KUCHAITA URANDA
Bhaibheri richitaura nezvaMwari rinoti “nzira dzake dzose ndedzokururamisira” uye rinotiudzawo kuti haana kuchinja. (Dheuteronomio 32:4; Maraki 3:6) Mwari akatuma Jesu kuti azozivisa ‘kusunungurwa kunhapwa uye kuzoita kuti vakadzvinyirirwa vaende vakasununguka.’ (Ruka 4:18) Izvi zvinorevei? Zvinoreva kusunungura vanhu pachivi nerufu. Jesu akazoti: “Chokwadi chichakusunungurai.” (Johani 8:32) Kunyange mazuva ano, chokwadi chakadzidziswa naJesu chiri kusunungura vanhu pazvinhu zvakasiyana-siyana.—Ona bhokisi rakanzi “ Kusunungurwa Pane Humwe Uranda.”
Mwari ndiye akabatsira Josefa uye Blessing kubva muuranda. Kuti unzwe nezvenyaya yaJosefa, verenga chitsauko 39 kusvika ku41 mubhuku raGenesisi. Blessing aidawo kusunungurwa kungofanana naJosefa.
Blessing paakadzingwa mune imwe nyika yekuEurope, akabva aenda kuSpain. Ava ikoko, akasangana neZvapupu zvaJehovha ndokubva atanga kudzidza Bhaibheri. Neshungu dzekuda kusiya mararamiro akaipa aaita, akatsvaga rimwe basa achibva akumbira mukadzi uya waaiva nechikwereti naye kuti amuderedzere mari yaaifanira kubhadhara pamwedzi. Rimwe zuva mukadzi uyu akafonera Blessing. Aida kuudza Blessing kuti achirega hake kubhadhara chikwereti chacho uye akakumbira ruregerero. Chii chakaita kuti adaro? Naiyewo akanga ava kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha! “Chokwadi chinokusunungura nenzira dzinoshamisa,” akadaro Blessing.
Jehovha Mwari akarwadziwa chaizvo neutsinye hwaiitirwa vaIsraeri muIjipiti; nanhasi anorwadziwa paanoona vanhu vachishungurudzwa. Kuti uranda hwemarudzi ese hupere, pane zvinhu zvinofanira kutanga zvagadziriswa panyika. Mwari anovimbisa kuti achazvigadzirisa. “Kune matenga matsva nenyika itsva zvatakamirira maererano nezvaakapikira, uye kururama kuchagara mazviri.”—2 Petro 3:13
^ ndima 3 Panguva iyi, ukoshi hweeuro hwainge hwakada kungofanana nehwedhora rekuAmerica.
Kusunungurwa Pane Humwe Uranda
Alonso aiva muranda wemadrugs. Akazvitanga achiri mudiki, uye aishandisa cocaine neheroin. Anoti, “Kuti ndirambe ndichiwana mari yekuita izvi, ndakatanga kuba, ndikazopedzisira ndava kuita bhizinesi rekutengesa madrugs. Ndakaenda kuzvipatara 4 ndichiedza kubatsirwa kusiya zvemadrugs asi zvakaramba. Ndakapedzisira ndasungwa ndichibva ndavharirwa mujeri kwemakore 4.”
Alonso akaita zvemadrugs kwemakore 30 uye akabva azotanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha. Zvaakadzidza zvakamubata, uye zvakaita kuti ade kusiya zvemadrugs. Anoti, “Zvakanga zvisiri nyore, sezvo ndakanga ndava nemakore. Asi Jehovha Mwari akandibatsira kukunda hondo yacho.”—Pisarema 55:22.
“Mudzimai wangu ari kufara chaizvo nekuchinja kwandakaita,” anodaro Alonso. “Handizivi kuti Jehovha ndingamutenda sei nekundinyurura kwaakandiita mumatope. Dai asiriye akandibatsira, ndaizoramba ndiri muranda, uye kutaura kuno zvimwe ndingadai ndakatofa.”